औषधिका नाममा खुलेआम ठगीधन्दा- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
औषधिका नाममा खुलेआम ठगीधन्दा
फाल्गुन ३, २०७३ देवनारायण साह
मोरङ — पूर्वी क्षेत्रमा अवैध रूपमा खुलेका औषधि पसल छ्यापछ्याप्ती रहे पनि नियमनकारी निकाय मौन छ । लामो समयदेखि अनुगमन नै नभएकाले औषधिका नाममा चलिरहेको ठगी धन्दा झन् मौलाउँदो छ ।
जिल्लाका कतिपय औषधिपसलेले म्याद गुज्रिएका औषधि र खुलेआम लागूऔषध बेचिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार गाउँगाउँमा निरक्षरदेखि अहेवसम्मले चलाउँदै आएका औषधि पसलको कसैले अनुगमन गरेको छैन ।
सिरहा क्याम्पसका प्राध्यापक मधुसूदन यादवले सीमावर्ती बजार तथा गाउँमा बग्रेल्ती खुलेका औषधि पसलमा लागूऔषध तथा प्रतिबन्धित औषधि खुलेआम बिक्री भइरहेको बताए । ‘अन्य औषधिमा पनि पसलेले मनलागी मूल्य असुलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सप्तरीको बजार क्षेत्रमा खुलेका प्रत्येक क्लिनिक, होम क्लिनिक, निजी अस्पतालमा अवैध रूपमा औषधि पसल चलाइएका छन् ।’
राजविराजका जितेन्द्र साहले यहाँका बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अवैध औषधि पसलको संख्या औंलामा गन्ती गरेर साध्य नहुने बताए । पसलेले स्थानीय सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा मनोमानी मूल्यमा जस्तोसुकै औषधि बेचिरहेको उनले आरोप लगाए ।
आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नहुँदा औषधि व्यवस्था विभागको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको काम निष्प्रभावी हुँदै आएको छ । कार्यालयमा डेढ दशकदेखि दरबन्दीका कर्मचारी नहुँदा औषधि पसलको अनुगमन हुन सकेको छैन । पूर्वका १६ जिल्लाका औषधि उद्योग अनुगमन तथा पसल निरीक्षणको दायित्व विराटनगरस्थित औषधि व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालयको हो । कार्यालयलाई प्रतिबन्धित तथा म्याद गुज्रेको औषधि बिक्री वितरण भए/नभएको अनुगमन गरी दोषीमाथि कारबाही चलाउने अधिकार रहन्छ ।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख शम्भु साहले विगत १५ वर्षदेखि दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा औषधि पसलको नियमनमा समस्या रहेको स्वीकारे । त्यहाँ औषधि व्यवस्थापक, फार्मेसी अधिकृत ७ औं र आठौं तहका, फार्मेसी सुपरभाइजर पाँचौं र छैठौं तहका, नायव सुब्बा, सहायक लेखापाल, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ । तर, ९ जना अपुग रहेको निमित्त प्रमुख शाहले जानकारी दिए ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्ममा ३ हजार ५ सय औषधि पसल दर्ता रहेकामध्ये ३ हजार पसल नियमित रहेको छ । ‘मैले आफू भदौ २० गते हाजिर भएर आएदेखि नै आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गर्दै आएको छु,’ शाहले भने, ‘औषधि व्यवस्थापकको पत्र प्राप्त भएको छ, विभागले यहाँका लागि ४ जना फार्मेसी अधिकृत, ४ जना फार्मेसी सुपरभाइजर करार भर्नाका लागि विज्ञापन गरिसकेको र १ जना दरबन्दीका फार्मेसी अधिकृत तत्काल पठाइदिने आश्वासन दिएको छ ।’ आफूलाई कार्यालयको नियमित कामबाटै फुर्सद नहुने भएकाले अनुगमनमा जान सक्ने स्थिति नै नभएको बताए । ‘अनुगमनमा गए पनि दोषी पाइएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया चलाउनै कठिनाइ छ,’ उनले भने ।
कार्यालयले कहिलेकाहीँ बजार क्षेत्रमा मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बढेको बेथितिबारे भने चासो देखाएको छैन ।
शाहका अनुसार लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न भारतका हर्वेन्द्र सिंहमाथि इलाम जिल्ला अदालतमा हालै मुद्दा दर्ता गराएको र थप अर्का एक जनामाथि मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै १ सय ४१ वटा पसलमा अनुगमन गरेकोमा कारबाही दायरामा ल्याइएका ६१ वटामध्ये २५ वटा बन्द, सात जनाको दर्ता खारेज र बाँकीलाई सचेत गराइएको छ । ‘लाइसेन्सबिनै पसल सञ्चालन, म्याद गुज्रेका औषधि बिक्री, लागूऔषधको व्यवस्थित फाँटबारी नराखेको, कालोबजारी, औषधि खरिद–बिक्रीको उचित विवरण नराखेको, सूचीकृत नभएका औषधि बिक्रीवितरण गरिरहेको पाइयो,’ उनले भने ।
शाहका अनुसार अनुगमनमा निस्कन जनशक्तिसँगै स्रोतसाधन पनि पर्याप्त छैन । अहिले पनि २०३१ सालमा दिइएको जिपका भरमा अनुगमन गर्नुपरेको छ । उनले अहिलेको आवश्यकताअनुसार दरबन्दी र स्रोतसाधन मिलाइदिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७३ ०७:३१
फिल्ड अफिस नहटाएकामा नारायणकाजीको आपत्ति
फाल्गुन ३, २०७३ कान्तिपुर संवाददाता
नयाँ दिल्ली — माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ तीन दिनयता नयाँ दिल्लीमा छन् । पार्टीको आन्तरिक कामबाहेक उनी भारतका विभिन्न राजनीतिक दल तथा बुद्धिजीवीहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त छन् ।
नेपालको राजनीतिक मामिलामा भारतले गर्ने हस्तक्षेपको कडा विरोध गर्दै आएका श्रेष्ठको भारतीय पक्षसँगको अन्तरक्रियालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । उनले लामो समयदेखि एउटा विषय उठाउँदै आएका छन्, जसलाई भारतीय पक्षले रुचाएको छैन । त्यो हो– विराटनगरमा कोसी बाढीको समयमा भारतले स्थापना गरेको फिल्ड अफिस नहटाएकामा आपत्ति । उनी परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री भएकै समयमा उनले यो विषय जोडदारसाथ उठाएका थिए । पछिल्लो समयमा गत सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको समयमा पनि यो विषयलाई उठाउन उनले सुझाव दिएका थिए ।
भारतका राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा चाहिं उनले के–के कुरा राखिरहेका छन् त ? उनले सार्वजनिक भाषण तथा मिडियामा बोलेजस्तै भारतीय पक्षसँग विषय राख्न सकेका छन् ? उनी भन्छन्, ‘मैले सार्वजनिक रूपमा जेजे कुरा भन्दै आएको छु, त्यसलाई मैले स्पष्ट रूपमा भारतीय नेताहरूसँग राखेको छु ।’ शनिबार नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा श्रेष्ठले भारतको हस्तक्षेप तथा नाकाबन्दीका बारेमा स्पष्ट रूपमा बोलेका थिए ।
तत्काल चुनावको घोषणा गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको बीचमा समझदारी बनाएर श्रेष्ठ भारत भ्रमणमा आएका हुन् ।
माझखण्डमा छैन खानेपानी
बिन कम्पोस्टिङ : प्रभावकारी भएन
मानसिक हिंसाका उजुरी बढे
हनुमन्ते किनारको जग्गा एकीकरण
होमस्टेमा जुटे माझखण्डका युवा